Kune vatambi vakawanda mu genshin impact ❤️ GOTAUKA.COM
Zvese ruzivo uye Nhau nezve Social Networks.
Mugovera, Gumiguru 16, 2021
GOTAUKA - Ruzivo rwese uye Nhau nezve Social Networks.
Kune multiplayer mu genshin impact
Last updated Jul 16, 2021 527 1
Muchikamu chino iwe uchaona kuti unoshamisa sei mutambo uyu uye izvo zviri genshin impact pane nzira yevatambi vakawanda izvo zvinokuita iwe uve neruzivo rwakakura rwekugovana neshamwari dzinosvika nhatu mune mushandira pamwe online multiplayer mode sarudzo.
Nehurombo pakutanga kwemutambo uyu wevhidhiyo iyi nzira yevazhinji haina kuwanikwa uye unofanirwa kuivhura ndosaka uri pano uye ini ndichakuudza maitirwo azvo kuti iwe ugone kuwana yepamhepo multiplayer modhi uyezve kuti iwe koka shamwari dzako dzepamwoyo.
Tevedzera izvi zvinokurudzirwa kuti uvhure vatambi vazhinji mu genshin impact
Pakutanga ini ndakakuudza kuti kupinda uye kutamba mune iyi multiplayer modhi iwe unofanirwa kuvhura ivo, usatya nekuti kana uchitanga mutambo mutsva haikubvumidze iwe kuti upinde, asi kune izvi iwe unofanirwa kuteedzera aya mazano:
Kutanga iwe unofanirwa kutamba nguva pfupi ini yandinotaura nezvemaawa mune solo modhi zvirinani kusvikira iwe wakwidziridza yako yekutamba chinhanho kusvika padanho regumi neshanu
Ramba uchifunga kuti iro danho reiyo adventure chinhanho uye iro danho rehunhu hwako rakasiyana kwazvo (usakanganise)
Iyo yepamhepo multiplayer modhi ichavhurwa kana iwe uine chikamu chegumi neshanu renji renji
Pamusoro pechiratidziro chako uchaona kuti nyeredzi ichaonekwa kuitira kuti usavhiringike, tarisa padhuze nemepu yako nyowani ipapo ichave iripo, ndipo pauchazokwanisa kupinda muvazhinji mode kuti ukwanise kutamba neyako shamwari nhatu.
Iyi nhanho yandiri kutaura nezvayo, inova irwo ruzivo, ndiyo inosarudza kuti vavengi vako vakasimba sei kana kuti uchave wakazviwana uri munzira yenyika ino inoshamisa mu genshin impact.
Rangarira kuti ipapo iwe uchave nemukana wekuita odha dzezuva nezuva dzevatambi vaunorovera munzira, kuita mamishini, kuvhura zvipfuva, kukwirisa, kuwana ruzivo, nezvimwe.
Pane zvinokwira pamusoro genshin impact
Vangani mavara arimo genshin impact
Iwe unogona zvakare kuda Zvinyorwa kubva kumunyori
Mabhokisi mangani ari mukati genshin impact
vatambi vangani varimo genshin impact
Ratidza mhinduro (1)
Prev	Next 1 pa70
© 2021 - GOTAUKA. Kodzero Dzese dzakachengetedzwa.
Isu tinoshandisa maKuki kuyera kusangana kwevateereri uye huwandu. Kana iwe uchibvumirana, isu tinoshandisa zvakare makuki uye data kuratidza zvakasarudzika ads Zvemukati uye zvakasarudzika kushambadza zvinogona kubva pane zvaunoita, sekutsvaga kwaunoita paGoogle uye mavhidhiyo aunotarisa paYouTube, izvi zvinoratidzwa mune akakodzera mazano ane kushambadzira zvinoenderana nezvako zvido.kubvumaVerenga zvimwe